'Squid Game' dia manana varotra ofisialy amin'ny alàlan'ny Netflix - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Manana ny varotra ofisialy amin'ny alàlan'ny Netflix i 'Squid Game'
Manana ny varotra ofisialy amin'ny alàlan'ny Netflix i 'Squid Game'
Tian'izao tontolo izao ny lalao «squid»
by Trey Hilburn III Oktobra 10, 2021 321 hevitra
Nalain'ny tafio-drivotra sy ny henan'izao tontolo izao. Ny andiany Koreana Netflix Lalao Squid mandeha amin'ny tafontrano. Misy antony tsara ihany koa. Mahatalanjona ity andiany ity ary mendrika ny fotoanao tanteraka. Afaka nijery azy io mialoha aho ary nanandrana nilaza tamin'ny olona rehetra fantatro fa hiditra ao. Soa ihany fa niitatra toy ny afo an'ala tamin'ny fahamendrehany manokana. Netflix dia nitondra ny zava-bita ho amin'ny ambaratonga faran'izay tsara ary nanome anay mpivarotra ofisialy tamin'ny alàlan'ny fivarotany.
Ny synopsis ho an'ny Lalao Squid mandeha toy izao:
Ity andiany ity dia miompana amin'ny fifaninanana izay misy mpilalao 456, nalaina avy amin'ny fari-piainana samy hafa nefa samy manana trosa be dia be, milalao andiana kilalao ankizy misy sazy mahafaty noho ny fahaverezan'ny vintana hahazoana loka 45.6 miliara.
Mba hanafarana ny anao Lalao Squid mpivarotra ETO. Tena mihady ny Lalao Squid famolavolana tsaoka. Ary koa, mihady tanteraka ny hoodie, na dia azo atao aza ny miseho ho hoodie Playstation ho an'ny mpitazana mahazatra.
Afaka nijery ilay andiany ve ianao? Moa ve ianao manao azy tahaka ny fanaon'ny olon-drehetra? Ampahafantaro anay ny zavatra nohadinao momba ilay andian-dahatsoratra na Facebook or Twitter pejy.
Nisy koa a Squid Game prank manao ny fihodinana. Vakio bebe kokoa momba izany eto!